साबधान यस्तो कहालीलाग्दो छ टेकु अस्पतालमा बिरामीको हालत – Classic Khabar
May 10, 2021 170
होम आइसोलेसनमा बसेका उनलाई तीन दिनअघि पनि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमै जाँच गराउन ल्याइएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै चिकित्सकले उनलाई घरमै बस्नु भन्दै फर्काइदिएका थिए । ‘राति ११ बजेदेखि सास फेर्न गाह्रो भयो । घरमै अक्सिजन दियौं । सुधार नभएपछि अस्पताल ल्याउन एम्बुलेन्स खोज्यौं, कतै पाएनौं,’ बिरामीकी श्रीमतीले भनिन्, ‘प्राइभेट गाडीमा घर नजिकैको पाटन अस्पताल पुर्यायौं । राख्ने ठाउँ छैन भनेर फर्काइदियो । अल्कामा गयौं, त्यहाँ पनि अक्सिजन छैन भनेर लिएन । बानेश्वरको सिभिलमा गयौं, त्यहाँ पनि बेड छैन भन्दै फर्कायो ।’
आइतबार बिहान ६ बजे आकस्मिक कक्ष बाहिरको भुइँमै बसेर अक्सिजन लिइरहेका उनलाई अपराह्न ४ बजेमात्रै भित्र बेडमा सारिएको थियो ।ती पुरुषकै छेउमा बालाजुकी ५० वर्षीया महिला फलामको कुर्सीमा बसेकी थिइन् । उनलाई पनि अक्सिजन लगाइएको थियो । उनका ३० वर्षीय छोरा ह्वीलचियरमा थिए । उनीहरू बिहान ९ बजे आइपुगे पनि अपराह्नसम्म अस्पतालबाहिरै थिए ।
अस्पतालमा आमा–छोराकै एक्सरे भयो । ‘आमाको अक्सिजन लेबल घटेको पाइएपछि अक्सिजन दिएर राखिएको छ,’ उनीसँगै ह्वीलचियरमा बसेका युवकले भने, ‘भित्र बेड छैन भनेर बाहिर राखिएको छ । अन्यत्र जाऊँ यही अक्सिजन पनि पाइँदैन ।’ अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट छेउको पर्खालमा दुई वटा सिलिन्डर ठड्याइएको थियो । त्यसमध्ये एउटामा एक साताअघि डिस्चार्ज भएकी महिलालाई प्लास्टिकको कुर्सीमा राखेर अक्सिजन दिइराखिएको थियो ।
उनले अस्पतालको बाहिरै उपचार गरेको फोटो र भिडियो खिच्न पुगेका पत्रकारहरूसँग सरकारमाथि रिस पोखिन् । ‘आफूलाई कति गाह्रो भएको छ । हामीले जतिसुकै असुविधा भोगेको भिडियो देखाए पनि सरकारले गर्ने केही होइन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारमा बस्नेलाई लागेपछि थाहा हुन्छ कोरोना कस्तो रोग हो ?’
पीडाका बेला पनि बेडमा बसेर उपचार गर्न नपाएकोमा उनको सरकारप्रति आक्रोश देखिन्थ्यो । जतिसुकै आक्रोश भए पनि छिनछिनमा आएर स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने जाँचले उनको दुखाइलाई केही हदसम्म शान्त बनाउँथ्यो । उनलाई पनि अबेरसम्म अस्पताल बाहिरै अक्सिजन दिइएको थियो । पौने ५ बजेतिर एक युवतीलाई एम्बुलेन्सबाट सहिद शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा ल्याइएको थियो । चिकित्सकले एम्बुलेन्समै उनको अवस्था बुझे ।
सास फेर्न गाह्रो भएकाले अरू अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि उनी टेकु अस्पतालको शरण लिन पुगेकी थिइन् । भर्ना गर्न बेड नपाइए पनि उनलाई एम्बुलेन्सबाट ओरालेर आकस्मिक कक्ष जाने सिँढीकै छेउमा राखेर अक्सिजन दिइयो । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष बाहिर १० वटा सिलिन्डर राखिएको छ । अस्पतालमा पुग्ने केहीलाई भुइँमै सुताएर अक्सिजन दिइएको थियो । केहीलाई प्लास्टिकको कुर्सीमा राखिएको थियो । अक्सिजन नचाहिने बिरामी अस्पताल परिसरमा छरिएर बसेका थिए ।
परिवारका ५ जना नै थलिएर उपचार गराउन टेकु पुगेका थिए । संक्रमितको स्याहार गर्न पोजिटिभ नदेखिएका परिवारका सदस्यहरू पनि खटिइरहेका थिए । संक्रमितहरू काठमाडौं उपत्यकाका ठूला भनिएका निजी र सरकारी अस्पताल चहारेर कतै पनि भर्ना नपाएपछि टेकुमा पुग्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एम्बुलेन्स र बेडका लागि आग्रह गर्दा नजिकको अस्पतालमा जान जवाफ पाउँछन् । ‘टाढै गए पनि बेड पाउन गाह्रो भयो,’ बुहारीलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका ९ वटा अस्पताल चहारेर टेकु अस्पताल बाहिर ह्वीलचियरमा बसेर अक्सिजन लिइरहेका महिलाका आफन्तले भने । यो समाचारकान्तिपुर दैनिकमा छ ।
कोभिडविरुद्धको लडाइँ सफल बनाउन सबैको भूमिका आवश्यक छ ः उपप्रम पोखरेल
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ विरुद्धका लडाइँमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा उहाँले केन्द्रको कार्य अनुकरणीय रहेकाले यसको सुदृढ जीवनका लागि लाग्न पुनलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारका तर्फबाट आविष्कार केन्द्रलाई सक्दो सहयोग गरिने आश्वासन उहाँले दिनुभएको प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ सफल बनाउन सबै नागरिकको सकारात्मक भूमिकाको आवश्यक रहेकामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभयो । सो अवसरमा केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कोभिड–१९ को संकट आउनासाथ आफूहरुले ११ प्रकारका सामान तयार गरी निःशुल्क वितरण गरेको र अहिलेसम्म ३८ हजार ५०० थान पिपिई निःशुल्क वितरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक पुनले संकटकालीनावस्थामा त्यहीअनुसारको अध्यादेश र कानून बनाएर भए पनि जनताको जीवनरक्षा गर्न उपप्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
Prevभूत उतारिदिन्छु भन्दै एक लाख र औठिपनि लिए, सबै कपडा उतारेर त्यसपछि… !
Nextघरमै आइसोसनमा बसेका कोभिडका बिरामीले अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले के गर्ने? भर्ना गरेर अक्सिजन, अन्य उपचार लिन नपाउँदा के गर्ने ? जन्नुहोस
गर्मी मौसममा चुकन्दर खानुका चमत्कारी फाइदाहरु, जान्नुहोस